musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Eustatius Kuputsa Nhau » St. Eustatius Anogamuchira Vashanyi Vakazara-Vakadzivirirwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Eustatius Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vasiri-vakabaiwa vagari, nhengo dzemhuri, vashandi kana vanhu vane imba muStatia uye vaive munyika ine njodzi huru kana nyika ine njodzi yakanyanya pamberi vanogamuchirwa zvakare asi vanofanirwa kuenda kunzvimbo yekuisa vanhu kwemazuva gumi pakupinda.
Vasiri-vachengeti vashanyi havagone kushanyira Statia.
Nekuda kwekukanganisa kukuru kwe COVID-19 pahupfumi hweStatia, Hurumende yemuno haina imwe sarudzo kunze kwekuenderera mberi nekuvhura chitsuwa.
Rondedzero yengozi yakanyanya, njodzi huru, njodzi yakaderera uye nyika dzakadzika kwazvo dzinogadziridzwa nguva nenguva.
Ruzhinji Rwevanhu St. Eustatius izvi zvinoyeuchidza nharaunda kuti seMuvhuro uri kuuya, Nyamavhuvhu 2, 2021 chikamu chechitatu cheRoad Map chichava chinoshanda. Izvi zvinoreva kuti vakabaiwa vachena zvizere vanosanganisira vashanyi vanogona kushanyira Statia.
Vashanyi vanobva munyika dzine njodzi huru vanofanirwa kutevedzera mutemo wakaomarara wemazuva mashanu pakusvika unosanganisira kupfeka chifukidzo kumeso, kuchengeta nharaunda uye kusapinda zviitiko zvikuru zvakarongeka. Vavhivhi vashanyi vanobva kune njodzi dzakanyanya nyika vanogamuchirwa asi vanofanirwa kuenda (pakati) kwega kwega kwemazuva mashanu pakupinda. Vakadzi vakazara vakabaiwa kubva kunyika dzine njodzi shoma havafanirwe kutevedzera dzimwe nhanho uye havafanirwe kuenda kunzvimbo yekuisa vanhu voga.
Vagari vasina kubaiwa majekiseni, nhengo dzemhuri, vashandi kana vanhu vane imba muStatia uye vaive munyika ine njodzi huru kana nyika ine njodzi yakanyanya pamberi vanogamuchirwa zvakare asi vanofanirwa kuenda kunzvimbo yekuzvimiririra kwemazuva gumi pakupinda. Vasina vaccinic vashanyi havakwanisi kushanyira Statia.
Rondedzero yengozi yakanyanya, njodzi huru, njodzi yakaderera uye nyika dzakaderera kwazvo dzinozovandudzwa nguva dzose.
Kuenderera mberi kuvhura kunoreva kuti kune njodzi yakanyanya kubatanidzwa sezvo vashanyi vazhinji vanobva (zvakanyanya) nyika dzine njodzi vanogona kupinda muStatia uye vanogona kuunza hutachiona kuchitsuwa.
Uye zvakare, iyo Delta musiyano we COVID-19 inowedzera huwandu hwengozi sezvo uyu musiyano uri kutapukira. Nekudaro, nekuda kwekukanganisa kukuru kwe COVID-19 pahupfumi hweStatia, uye nenyaya yekuti mapakeji ekutsigira magariro ehurumende yeDutch haachazopihwa, Hurumende yemuno haina imwe sarudzo kunze kwekuenderera mberi nekuvhura chitsuwa.